‘सहकारीमा राजनीतिको रोग केन्द्रबाट जिल्लासम्म सरेको छ’ | Nepal's First Co-operative News Portal.
Home अन्तर्वार्ता [Interview] ‘सहकारीमा राजनीतिको रोग केन्द्रबाट जिल्लासम्म सरेको छ’
अध्यक्ष : कास्की बचत तथा ऋण सहकारी संघ
प्रबन्ध सञ्चालक : विशाल को–अपरेटिभ लिमिटेड, पोखरा
म भन्छु, राजनीति गर्नेले गर । यदी सहकारी अभियानमा आउने हो भने विशुद्ध भएर आऊ । सहकारीमा राजनीतिको रोग केन्द्रबाट जिल्लासम्म सरेको छ । जिल्लाबाट प्रारम्भिक सहकारीमा आयो भने के होला ?
विगत १८ वर्षदेखि सहकारी अभियानमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ सुदिप ढकाल । १८ वर्षअघि बिशाल को–अपरेटिभ लिमिटेड स्थापना गरि निरन्तर सहकारी अभियानमा सक्रिय छन् ढकाल । बिशाल को–अपरेटिभ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका– ४ बुद्धविशाल बजारमा रहेको छ । बिशाल को–अपरेटिभ पोखराको उत्कृष्ठ सहकारीको रुपमा परिचित छ ।
निजी व्यवसाय छाडेर सहकारी अभियानमा प्रवेश गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म सधै सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्ति हुँ । म र मेरो भन्ने व्यक्तिका लागि सहकारी साँघुरो होला तर हामी र हाम्रो सोच राख्नेका लागि यो भन्दा राम्रो फोरम कुनै छैन ।’
ढकालको कुशल व्यवस्थापनले उहाँको नेतृत्व क्षमता झन् चुलिएको छ । उहाँ कास्की बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, कास्की जिल्लाका समग्रसहकारीको अवस्था, बचत संघले सदस्य संस्थाका लागि गर्दै आएको काम लगायत सहकारीका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर सहकारीखबरकर्मीले गरेको कुराकानी ।
कास्की जिल्लामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
कास्कीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अवस्था उत्कृष्ठ छ । २०५६/०५७ सालमा केही समस्या आएका थिए तर अहिले त्यस्ता समस्या छैन । सहकारी संस्थालाई डिभिजन कार्यालय, जिल्ला सहकारी संघ र बचत संगको विभिन्न अवस्थामा सहयोग गरिरहेको छ । समग्रमा जिल्लाको सहकारी अभियान व्यवस्थित र अनुशासित रहेको छ ।
जिल्ला बचत संघले सदस्य संस्थाहरुको लागि के कस्ता काम गर्दै आएको छ ?
सहकारीमा अभियान्ता र सहकारीका सञ्चालकबाटै केही गल्ती भएका छन् । गल्ती जानेरभन्दा पनि नजानेर भएका हुन् । सहकारीको नियमनकारी निकाय डिभिजन कार्यालयको जनशक्तिले ५० वटा सहकारीलाई पनि तालिम दिन पुग्दैन । ६ सय भन्दाबढी सहकारी कास्की जिल्लामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बचत संघको मूख्य काम भनेको शिक्षा, तालिम र सचेतना कार्यक्रम हो ।
सम्भावना र चुनौती बोकेको सहकारी भनेको बचत तथा ऋण सहकारी नै हो । अन्य विषयगत सहकारी धेरै भएपनि मुलुकको सहकारी अभियानलाई डो¥याउने काम बचत तथा ऋण सहकारीले गरिरहेको छ । बचत संघले विभिन्न तालिम दिँदै आएको छ । सहकारी नै नबुझेका सञ्चालक आउँदा गल्ती हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । मुख्यतः जिल्ला संघ शिक्षा, तालिममा केन्द्रित छ ।
शिक्षा, तालिमको अभावले धेरै सहकारी समस्या देखिएका छन् । यी कुरामा सहमत हुनुहुन्छ ?
अवश्य पनि । केही हदसम्म नियत नै गलत हुन सक्छ । मुख्यतः शिक्षा, तालिमको अभावका कारण समस्या देखिएको हो । बहुदलीय व्यवस्थापछि नै सहकारी अभियानले गति लिएको हो । ऐन कडा नहुँदा पनि समस्या देखिएको हो । सदस्यले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश खान नपाउने व्यवस्था गरेको र २० प्रतिशत कर लगाउनु कत्तिको उपयुक्त हो ? यसले गर्दा नाफा लुकाउने प्रवृति सहकारीमा बढेको छ । धेरै सहकारीले नाफा लुकाउँछन् । यो कुरा डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई पनि थाहा छ । नाफा लुकाउँदा सहकारीको दिगो विकास भने भएन । कोषहरुको विकास समेत हुन सकेन । संसदबाट भर्खरै पारित गरेको सहकारी विधेयकमा कर कम भएर आएको छ । अब सहकाले राम्रो फड्को मार्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।
कस्कीमा बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या कति छन् ?
जिल्ला भर करिब तीन सय ५० बचत तथा ऋण सहकारी छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी भनेपनि उहाँहरुको काम बचत तथा ऋण नै हो । यी बचत तथा ऋण सहकारी मध्ये २६० बचत संघमा आवद्ध भएको छ । बाँकी संस्थाहरुलाई सदस्यका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं । भौगोलिक कठिनाईले पनि सदस्य बनाउन कठिन भएको छ ।
बचत संघमा सदस्य किन बन्ने ?, सदस्य बनेर के फाइदा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् नि ?
जुन दिन समस्या पर्छ, त्यो समयमा सहयोग गर्ने हामी नै हौं । सहकारीको वर्तमान अवस्था, ऐन नियमको कुरा, भावी दिनमा आईपर्ने समस्या लगायतमा हामी जानकारी गराउँछौं । संघबाट विभिन्न तालिम सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्दै आएका छौं । अहिले फाइदा नदेखिएपछि समस्या पर्दाको समयमा अभिभावक हुनेछौं ।
सहकारीमा आवद्ध भएका सदस्यहरुले सहकारीका बारेमा कत्तिको बुझेका छन् त ?
कास्की जिल्लाको हकमा सदस्यले सहकारी बुझेका छन् । सहकारी भनेको कम्पनी होईन, यो बैंक तथा वित्तीय संस्था होईन भनेर बुझाउन सकेका छौं । सहकरीबाट गर्ने सकिने उद्यमका बारेमा बुझाएका छौं । सहकारीका सिद्धान्त, मुल्य मान्यमा बुझाउने समय लाग्यो तर हामी सफल भएका छौं ।
उदाहरणको लागि विशाल साकोसले सदस्यहरु ७० वर्ष पूरा भएपछि सम्मान गर्दछौं । ७५ वर्ष पूरा भएपछि वार्षिक ४ हजार पेन्सन पाउनुहुन्छ । कडा रोग लागेमा सदस्य राहत कोष खडा गरेका छौं । मृत्यु भएको ३० हजार प्रदान गर्दछौं । कर्मचारी कल्याणकारी कोष रहेको छ । यस्ता सदस्य केन्द्रित सेवा बिशाल सहकारीले शुरु गरेपछि कास्कीमा धेरै संस्थाहरुले यस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । सर्टिफिकेट राखेर उच्च शिक्षाको लागि ऋण प्रदान गर्दछौं । यी कुराहरुले सहकारीका बारेमा बुझेका छन् ।
हाल सहकारीमा देखिएका समस्या के–के हुन् ?
दुःखका साथ भन्नुपर्दा राज्यले सहकारी अझै बुझ्न सकेको छैन । निम्न वर्गका लागि सहकारी मात्र भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । संसार सहकारीबाट पनि विकास भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन । सहकारीबाट धेरै विकास गर्न सकिन्छ । यो कुरा बुझाउन हामीलाई लागि रहेका छौं । एकदिन उहाँहरुले अवश्य बुझ्नुहुनेछ ।
जो सहकारीमा छैन त्यहि व्यक्ति सहकारीको नेता बनेर हालीमुहाली गरेर हिँडेका छन् । त्यहि व्यक्ति राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर हिँड्छ ।
यी कुराहरु सहकारी अभियानले बुझाउन नसकेको पनि हुन सक्छ नि त ?
मुख्य कुरा सहकारी अभियानमा कम राजनीति हुनुपर्नेमा चरम राजनीति भयो । राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा सहकारी अभियानको केन्द्रिय निकायमा पुगे । जो सहकारी चलाएर बसेका छन् उनीहरु प्रारम्भिक सहकारी मै छुटे । अहिले हेर्नुहुन्छ भने उत्कृष्ठ सहकारीका सञ्चालक केन्द्रिय पदमा छैनन् । जो सहकारीमा छैन त्यहि व्यक्ति सहकारीको नेता बनेर हालीमुहाली गरेर हिँडेका छन् । त्यहि व्यक्ति राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर हिँड्छ । राजनीतिक दलको कुनै न कुनै पदमा बसेका छन् । यसकारण उसले सहकारी बुझ्न पनि सकेको छैन र बुझाउन पनि । यी कारणले समस्या आएको हो । सहकारी पवित्र मन्दिर हो । राजनीतिक जुत्ता ढोका बाहिर फुकालेर प्रवेश गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । यो दुर्भाग्य हो । म भन्छु, राजनीति गर्नेले गर । यदी सहकारी अभियानमा आउने हो भने विशुद्ध भएर आऊ । सहकारीमा राजनीतिको रोग केन्द्रबाट जिल्ला तहसम्म आईपुगेको छ । जिल्लाबाट प्रारम्भिक सहकारीमा आयो भने के होला ? संस्था भित्र एउटा पार्टीको पैसा चल्ने र अर्को पार्टीको पैसा नचल्ने भयो भने सहकारीको भविष्य कता जाला ?
तपाईंले जिल्ला बचत संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने बिशाल को–अपरेटिभको बारेमा केही बताईदिनुस् न ?
पोखराको बिशाल बजारमा बिशाल सहकारी रहेको छ । बिशाल बजारमा करिब तीय सय पसल रहेका छन् । यो बजारमा ८० जना जति घरबेटी हुनुहुन्छ । २७ जनाबाट संस्था स्थापना गरेका हौं । बिशाल बजारमा व्यवसाय गर्ने २७ जनाबाट सुरु गरेका छौं । व्यवसाय गर्दा बैंकमा ऋण माग्न जाँदा बैंकका कर्मचारीले सिधै पैसा मागे । हामी आफ्नो खाँचो टार्न गएको मान्छेलाई सेवा शुल्क, व्याज सहित साँवा तिर्छुभन्दा पनि छुट्टै पैसा तिर्ने कुरा भएन भनेर त्यसपछि सहकारीको सुरुवात गरेका हौं ।
संस्थामा बिशाल बजारमा रहेको व्यवसायी सहकारीको सदस्य हुनुहुन्छ । हाल संस्थाको करिब १३ सय सदस्य गुगेको छ । ४० करोडको निक्षेप र सोही अनुरुपमा लगानी संस्थाको रहेको छ । १२÷१५ लाखको जिल्ला संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतमा सेयर रहेको छ । करिब २ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा जम्मा भएको छ । विभिन्न कोषहरु समेत खडा गरेका छौं । दुर दराजमा गएर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगायत गर्दै आएका छौं । करिब ५५ करोडको ब्यालेन्स सिट संस्थाको रहको छ । संस्था १० जना स्थाय कर्मचारी रहेका छौं ।
संस्थाले सदस्यको व्यवसाय प्रर्वद्धन कसरी गरिरहेको छ ?
हाम्रा सदस्यलाई कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने बारेमा पनि तालिम दिने गरेका छौं । सदस्यहरु विना संस्था रहँदैन । संस्थाले सदस्यको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । ७० लाखसम्म ऋण लगानी गर्ने गरेका छौं । हामीले अहिलेसम्म सदस्यको जाहेजेथा लिलाम गरेर ऋण असुल गरेका छैनौं र पत्रिकामा समेत नाम निकालेका छैनौं । संस्थाको खराब कर्जा ० प्रतिशत रहेको छ ।
हालै संसदबाट पारित भएको सहकारी विधेयकमा सहकारीका सञ्चालक कर्मचारीको रुपमा बस्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । यो कत्तिको व्यवहारिक छ ?
म संस्था स्थापनादेखि नै सचिव र प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छु । अब दुबै भूमिकामा बस्न नपाउने कुरा आएको छ । अब एकातिर पक्कै पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ । अर्को रमाईलो कुरा कास्कीमा उत्कृष्ठ २० सहकारीमा सचिव र प्रबन्ध सञ्चालक हुनुहुन्छ । के कारणले हटाउन खोजेका हुन् यसमा हामी दुविधामा छौं ।
नेपालमा सहकारीको भविष्य उज्जल देखेको छु । सहकारीमा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त यत्तिकै पक्कै बनेका होइनन् । यसलाई हामीले अबलम्बन गर्नुपर्दछ । नेपालमा सहकारीको संख्या अत्याधिक छ । सहकारी एकीकरण गरिनुपर्दछ । सहकारीमा जुँगाको लडाईं छ । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्ने हो भने भविष्यमा कुनै पनि संकट आउँदैन ।
सहकारीको प्रवद्र्धन गर्न साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्छौं : अध्यक्ष कंडेल
सहकारी विभागले जारी गर्‍यो १० बुँदे निर्देशन
अध्यक्ष कँडेलद्वारा पदभार ग्रहण, योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने प्रतिवद्धता
तपाई हाम्रो सहकारीको अध्यक्षमा पुनः मनोजकुमार थापा
बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई कृषि र पर्यटनमा काम गर्न बाँस्कोटाको सुझाव
‘सहुलियत र प्रोत्साहन बिना सहकारीमा एकिकरण कठिन’
सहकारीको साधारण सभालाई सहभागितामूलक बनाउन ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू
सहकारीको साधारण सभा सञ्चालनमा रहेको समस्याहरू
Archives Select Month January 2020 (53) December 2019 (55) November 2019 (47) October 2019 (27) September 2019 (34) August 2019 (35) July 2019 (16) June 2019 (20) May 2019 (17) April 2019 (42) March 2019 (7) February 2019 (8) January 2019 (42) December 2018 (29) November 2018 (12) October 2018 (2) September 2018 (20) August 2018 (12) July 2018 (11) June 2018 (25) May 2018 (17) April 2018 (6) March 2018 (35) February 2018 (18) January 2018 (16) December 2017 (30) November 2017 (13) October 2017 (16) September 2017 (18) August 2017 (19) July 2017 (6) June 2017 (10) May 2017 (9) April 2017 (24) March 2017 (18) February 2017 (7) January 2017 (42) December 2016 (64) November 2016 (30) October 2016 (22) September 2016 (32) August 2016 (33) July 2016 (36) June 2016 (72) May 2016 (24) April 2016 (47) March 2016 (49) February 2016 (47) January 2016 (68) December 2015 (47) November 2015 (27) October 2015 (23) September 2015 (47) August 2015 (49) July 2015 (52) June 2015 (93) May 2015 (77) April 2015 (95) March 2015 (61) February 2015 (73) January 2015 (59) December 2014 (85) November 2014 (101) October 2014 (67) September 2014 (132) August 2014 (148) July 2014 (126) June 2014 (63) May 2014 (77) April 2014 (76) March 2014 (51) February 2014 (41) January 2014 (73) December 2013 (101)